Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe oo xabsi guri la geliyay - Qotoqoto
Madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa xabsi guri la geliyay, iyadoo Milateriga dalkiisa ay sii wadaan dhaq dhaqaaqooda ay kula wareegayaan talada dalka.
Afhayeen u hadlay Ciidamada Milateriga ayaa xaqiijiyay in Madaxweyne Mugabe uu badqabo, waxaana uu ku hanjabay inay bartilmaameedsan doonaan dadka ku dhow dhow ee dhibaatooyinka bulsho iyo mid dhaqaale geliyay.
Madaxweynaha Koofur Afrika Jacob Zuma ayaa sheegay in Ciidamada Zimbabwe ay xabsi guri ka dhigeen Robert Mugabe.
Jacob Zuma ayaa qadka taleefanka kula hadlay Mr Mugabe, waxaana uu u xaqiijiyay inuu wanaagsan yahay, balse xabsi guri laga dhigay.
Is rasaaseyn culus ayaa laga maqlayay qeybo ka mid ah waqooyiga magaalada Harare, ciidamada Milateriga ayaa iyagoo gaadiid gaashaaman wata xiray waddooyinka, iyagoo la wareegay Xarunta Guud ee Telefishinka Qaranka ee ZBC.
Xiisada ka taagan Zimbabwe ayaa cirka isku shareertay, kaddib markii Robert Mugabe uu xilka ka qaaday Madaxweyne kuxigeenkiisa.
Sidoo kale Xaaska Madaxweyne Mugame Mrs Grace ayaa sheegtay inay bedeli doonto seygeeda.
Xisbiga talada haya ayaa isna ku eedeeyay taliyaha Ciidamada Milateriga inuu galay khiyaano qaran, kaddib markii uu ka soo horjeestay xil ka qaadista Madaxweyne kuxigeenka.
Robert Mugabe oo 93 jir ah ayaa talada dalka Zimbabwe hayay tan iyo sanadkii 1980, waxaa uu ka mid yahay madaxda Afrika ee ugu waqtiga dheer.
Previous PostPrevious Wasiir Kamid Ah Xukuumadda kheyre Oo Is Casishay
Next PostNext Gollaha Wasiirada Soomaaliya oo maanta ku shiraya magaalada Baydhabo